Inodhura-inoshanda glassfiber telescopic hwindo yekuchenesa pole
Kuwedzeredza Telescopic Carbon Fibhi Mvura Mvura Pole neBrashi
1. Inogona kusvika uye kuchenesa pamusoro pehwindo renhau mbiri zvakachengeteka pasina kana kumbofanira kubva pasi.
2. Unochengetedza nguva nekuchenesa uye nekushambidza mahwindo ako panguva imwe chete, hapana chikonzero chekusvina kana kupukuta kuchenesa hwindo
3. Matanda akareruka fiberglass kuvaka ichagadzira kuchenesa windows ako akareruka sekutsvaira mafloor ako
Mune yedu renji, danda rinogona kuchinjiswa kune chero hurefu, uye iwe unobvumidzwa kuwedzera kana kubvisa zvikamu zvinoenderana neinodiwa yekushanda kukwirira. Kureruka kwedanda kunogona kubatsira kudzikisa kuneta, kuwedzera kugadzirwa uye nekukurumidza pane iro basa. Iwe uchaona zviri nyore kwazvo kushanda nedanda redu.
12m 3k twill inotakurika mvura telescopic windows windows yekuchenesa pole
15m coni 30ft kabhoni fiber telescopic hwindo yekuchenesa pole
15m Square Carbon Fiber Telescopic Window Kuchenesa Pole
1. Izvo zvakakosha kune iro basa rekuchenesa windows uye kuita kuti iro basa riitwe.
2.Kushandisa chete zvikamu zvinoda kutapudzwa pasi pahuremu hwebanda pakuchenesa windows
3.Kubvumidza rimwe basa nekuneta kushoma.
20m rinorema basa rekuwedzera telescopic kabhoni fiber hwindo rekuchenesa matanda
72ft Glossy Twill Carbon Fiber Window Kuchenesa Matanda
Iko kushandiswa kweteresikopu yekuchenesa matanda kunogona kukurumidza uye nenzira kwayo kurasa guruva mumatanho mashoma, zvichitendera nyore kupinda kune zvakaoma-kusvika-nzvimbo.
Yese-nhanho yekuchenesa-hapana chikonzero chekuputsa pasi windows uye kupora zvakare. Inofananidzwa nenzira dzechinyakare, nzvimbo hombe dzinogona kucheneswa nekukurumidza, uye dzinogona zvakare kucheneswa kubva kumusoro kwepamusoro
4 Zvikamu 3K Telescopic Carbon Fiber Window Kuchenesa Matanda
10m 3k Yakakwira Modulus kabhoni fiber mast pole pole telescopic hwindo yekuchenesa matanda
Hybrid Bhuruu Yero Telescopic Mvura Yakagezwa Shamba Brashi Hwindo Kuchenesa Pole
Carbon fiber fafitera yekuchenesa pole ine kabhoni fiber tubeCarbon fiber chubhu, inozivikanwa se carbon kabhoni chubhu, kabhoni fiber chubhu, inogadzirwa neakabhoni fiber inoumbwa nezvinhu zvisati zvanyudzwa mu phenylene polyester resin nekupisa kurapa pultrusion (ichitenderera ). Mukugadzirisa, unogona kuburitsa akasiyana ma profiles kuburikidza neakaumbwa akasiyana, senge: maratidziro akasiyana eaka kabhoni fiber kutenderera chubhu, akasiyana maratidziro eakaenzana chubhu, jira zvinhu, uye mamwe ma profiles: mune yekugadzira maitiro anogona zvakare kuiswa mumapepa e3K pamusoro pekutakura. runako uye zvichingodaro.